192.168.8.1 - Chii chinonzi Default IP Kero?
An Internet Protocol kero chidhindo chiverengero chakapihwa kumidziyo yese yakabatana nePC network iyo inoshandisa Internet Protocol kufambisa. Iyo IP kero inopa 2 yakakosha zvinangwa: network interface kana inomiririra kuzivikanwa & nzvimbo kero.
Iyo IP kero yakapihwa PC netiweki kana IP kero yakapihwa kune network gadget nemutengesi wechigadzirwa. Networking zvishandiso zvakaiswa kune yakasarudzika IP kero; semuenzaniso, kazhinji maLysys ma routers anopiwa IP kero ye 192.168. 1.1
Kana iwe uchida kuenda kunzvimbo mune chaiko pasirese, iwe unokumbira iyo kero uye woiisa iyo muGPS. Mushure mekushuvira kuenda kune imwe nzvimbo paindaneti, iwe unotobvunza kero yayo, & iwe unonyora iyo mu URL bar yeyaunofarira web browser.
Maitiro ekutsvaga iyo default IP kero yeWIFI inopihwa pazasi:
Ose router mugadziri ane default login router IP kero inoonekwa pazasi peiyo router Hardware. Kana isina kunyorwa ipapo, saka unogona kuitora kubva kugwaro kana bhuku rinouya ne router mushure mekunge watenga.
Kana iyo ISP ikakugadzirira iwe neiyo router saka inokuudza iwe otomatiki iyo IP kero & maID kuti upinde muiri router & pinda iyo Internet.
Nzira Yekutsvaga Yekusarudzika Router Username nePassword?
Idzo dzekutangisa dzekutangisa dzinogona kuwanikwa kubva kuiri router handbook iyo inosvika neiyo router mushure mekunge iwe watanga kutenga & kubatanidza iyo.
Kazhinji, pakukwirira kwemaraira, maID ari default ari maviri "admin" pamwe ne "admin". Asi, kuzivikanwa uku kunogona kuchinja kunoenderana neanogadzira router.
kana warasikirwa nebhuku rekushandisa, ipapo mumwe anogona kuwana maAID ekumusoro kubva paari iro rairita Hardware sezvo iwo achizodhindwa kuseri kwetsamba imwe neimwe.
Kana uchishandisa rauta, tinogona kuchinja maID chero nguva kuti tirege kupinda zvisiri pamutemo kunetiweki. Izvi zvichaitwa kumisazve iyo router & pinda nyowani yekupfuura senge nesarudzo.
To router reset inobata iyo reset kiyi kwemasekondi mashoma & iyo router ichadzoserwa patsva kune yayo default fekitori zvisirizvo. Zvino, iwe unogona kushandura iyo yekumisikidza marongero & kumisikidza iyo yekupinda IDS yesarudzo yako.
Network zvishandiso zvakagadziriswa kune imwechete default IP kero; semuenzaniso, maLysys ma routers anowanzo kupihwa iyo IP kero ye 192.168.1.1. Iyo default IP kero inochengetwa isina kukuvadzwa nevazhinji vatengi ichiri inogona kuchinjwa kuti ikwane yakaomesesa network network. Shanyira iyo yakasarudzika gedhi & IP kero.
Izwi rekuti default Router IP kero rinoreva kune yakatarwa Router IP kero iyo iwe yawakabatanidzwa uye urikuyedza kupinda. Izvo zvinodiwa kune chero eiri bhizinesi kana epamhepo network.
The default IP kero router yakakosha kuwedzera kune iyo router webhu interface kuti uwane yayo control panel & network marongero. Iwe unogona kungo pinda kupinda kunetiweki marongero eiyo router mushure mekunyora iyi kero muwebhu browser yeiyo kero bar.